Barnaamijkaaga waxa lagu habeeyay DayHeart! Si bilaash u dhamaystir bogaaga, caawi waalidka si ay kuu helaan, oo ku guulayso lacag gaadhaysa illaa $1,000.
Hooyo ku nool ahaan Washington oo ka soo shaqaysay arimaha waxbarashada iyo wax barida caruurta 20-kii sanno ee u danbeeyay, waan ogahay hawsha adag ee loo marayo si loo helo daryeelidda ilmaha. Waxaa ila soo xidhiidha maalin walba waalidka doonaya inay ku helaan laakiin ma garanayaan halkay idinka ka soo eegaan ama waxay idin soo waydiiyaan. Sidoo kale waxaan ogahay shaqadayda aan la macaamilyay bixiyayaasha inay adag tahay in laga shaqeeyo daryeelida caruurta ama dugsiga ka dib, inaad wax badan qabataan si aad ugu adeegtaan qoysaska iyo caruurta bulshadiina. waxaan kaloo ogahay inaad waqti yar u helaysaan inaad xayaysiis samaysaan ama aad ka jawaabtaan telefoonada iyo iimaylada.
Inaad caawiso qoysaska baadhaya daryeelid ma aha inay noqoto hawl adag. Anagoo la shaqaynaya dhawr ka mid ah bixiyayaasha daryeelka caruurta, waxaan sameeyayDayHeart si hawlaha loogu wanaajiyo oo loogu fududeeyo waalidka iyo adeeg bixiyayaasha labadaba.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin la soo wadaago in DayHeart hada la furay iyo inaan anigu gaadhayo adeeg bixiyayaashii ugu horreeyay si ay kuu siiyaan fursad aad si bilaash ah ugu buuxsato barnaamijkaaga boggaDayHeart inta ka horraysa Julaay 1, 2019 oo ugu guulaysto lacag gaadhaysa $1,000 (eeg sharciyada hoose ee la bixitaanka). Halkan dooro si aad u eegto bogaaga oo aad ugu andacooto.
Isticmaalka DayHeart, waxaad awoodaa:
– Inaad hesho xayaysiin bilaash ah – DayHeart waxay markiiba gaadhsiinaysaa barnaamijkaaga in ka badan kumaan kun qoys oo dalka gudihiisa ah kuwaas oo baadhaya daryeel. Waalidiintu way idin baadhayaan iyo waxay saacado badan ku qaadanayaan si ay iskugu dayayaan inay helaan ta ugu haboon ee qoyskooda. Waxaad isku dayaysaa inaad hesho qoysas ku haboon. Waxay kugu helayaan DayHeart, adiguna waxaad gaadhaysaa macaamiishaada muhiimka ah si toos ah iyadoon wax kharash ahi kaaga baxayn.
–Ka jawaabidda su’aalaha waalidka si deg deg ah oo fudud – Waalidku waxay hataan su’aalo (aad u badan) adiguna waxaad haysaa jawaabo. DayHeart waxay gaadhsiinaysaa jawaabahaas waalidiinta iyagoon xataa wax yar oo waqtigaaga ah aan qaadanayn. Haddii ay jiraan meelo badan oo kuu banaan, ama dad badan oo hada bilaabaya, ama aad si xad dhaaf ah ugu baahan tahay oo haysato liis dheer oo sugitaan ah, waa inaad ka jawaabtaa iimaylada iyo telefoonada aad ka u badan ee su’aalaha fudud ee isku midka ah soona noqnoqonaya. Adeeg biixyaha bilaashka ah ee bogaaga DayHeart wuxuu kaaga jawaabayaa su’aalaha markasta la is waydiiyo ee barnaamijkaaga si aad waqti qiimo leh ugu qaadato halka aad baahida ugu badan u qabto – ee caruurta aad daryeesho ee aad ilaaliso.
–Buuxbuuxi oo la wadaag furitaankaaga si toos ah: DayHeart, waxaad soo dhigi kartaa furitaankaaga hada ama mustaqbalkaba ee barnaamijkaaga iyo waxaad si deg deg ah u gaadhi kartaa waalidka ku jira ee baadhaya daryeelka caruurta ee goobtaada. In lagu tiirsanaado hadalka suuqa, qoraalada baraha bulshada, xayaysiiyada craiglist iyo xayaysiisyada looxyadu waa shay la soo dhaafay.
–Baro tartamayaashaada – Waxaad awoodaysaa inaad aragto dhamaan barnaamijyada kale ee goobtaada, inaad hubiso waxay bixinayaan, iyo inaad macluumaad wanaagsan ka hesho muxuu barnaamijkaagu kaga duwan yahay.
-Inaad maamusho baahiyaha (soo socda) – Waqti intee leeg baa kaaga lumay inaad la hadasho liiskaaga macaamiisha ama aad ka werweraysay intee qoys oo ku jira liiskaaga sugitaanka ayaa sugaya inay helaan barnaamijkaaga? DayHeart waxay dhawaan ku daraysaa muuqaalka maamulida liiska sugitaanka kaas oo kuu ogolaanaya inaad hesho liis sugitaanka ugu danbeeyay oo aad fahanto baahida dhabta ah ee barnaamijkaaga.
Barnaamijkaagu wuxuu marka horeba leeyahay bogga DayHeart ee fudud — Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad maamusha oo aad ku darto macluumaad badan oo ku saabsan barnaamijkaaga. Haddii aad bogaaga dhamaystirto inta ka horaysa Julaay – 1-deeda, waxaad gelaysaa nasiib aad ku guulaysan karto lacag gaadhaysa illaa $1,000! Kaga andacood bogaaga halkan.
Mulkiilaha iyo Maamulaha DayHeart
Halkan dooro si aad u eegto bogaaga oo aad ugu andacooto.
Ma haysaa Suaalo? Halkan DayHeart ka eeg su’aalaha badanaa la is waydiiyo, Iimeelkan contact@DayHeart.co, ama soo garaac 360.562.0344
Kooxda Latalinta Bixiyaha DayHeart oo ay kamid yihiin:
Michele Austin, Bilingual Buddies Learning Centers (Preschool and FCC), Seattle and Tacoma
Sue Winn, former FCC provider, La Conner
Zam Zam Mohamed, Voices of Tomorrow (Preschool and FCC), Seattle and King County
* DayHeart waa 100% u bilaash bixiyayaasha iyo baadhayaasha macluumaadka aas aasiga ah ee kaas oo waalidka u bilaas ah. Wixii ka danbeeya mudada tijaabada hore, waalidku waxay bixin doonaan kharash yar oo gelitaanka h si ay macluumaadka si qoto dheer ugu baadhi karaan ku saabsan barnaamijyada si ay u arkaa meelaha furan. Macluumaadka aas aasiga ah ee bilaashka u ah waalidka waxaa ka mid ah: goobta, taleefanka, iimeelka, websaytka, barnaamijka la sharaxay, xadiga tayada, iyo hadii la ogol yahay kaabista ama bixinta barnaamijka ee qoysaska dakhligoodu hooseeyo.
*Xeerarka Tartanka: Bakhtiyaa nasiibka bogaga macluumaadka ayaa la samayn doonaa Julaay 2, 2019. Hal barnaamij wuxuu ku guulaysan doonaa $1,000, Barnaamij kalena wuxuu ku guulaysan doonaa $750, Laba barnaamij ayaa ku guulaysan doona $500, Saddex barnaamij oo kalena waxay ku guulaysan doonaan $250. Si aad uga qayb gasho bakhtiyaa nasiibka, waa inaad maamushaa bogaaga DayHeart oo aad ku dartaa macluumaadka inta ka horaysa Julaay 1, 2019. Adeeg bixiyayaashu waxay soo saarayaan hal macluumaad barnaamij kasta oo bogiisa la dhammaystiray.